မွနျမာ့ကိုယျခံပညာနိသညျြးမြား (မွနျမာနိုငျငံသိုငျးအဖှဲ့ခြုပျ) - Thaing Wizard
This entry was posted in Bando, Banshay, Martial Arts, Martial Arts Book and tagged စာအုပျ, ဗနျတို, ဗနျရှညျ by athtet. Bookmark the permalink.
ထိုင်းလက်ဝှေ့ရော ကူးထားပြီးပြီလား http://thaingwizard.wordpress.com/2013/02/21/thai-boxing-book/ အဲ့စာအုပ်မှာတော့ နည်းစနစ်တွေ ပါတယ်။ မြန်မာ့ရိုးရာလက်ဝှေ့ စာအုပ်ကတော့ နည်းစနစ်မပါဘူးဗျ။
http://thaingwizard.files.wordpress.com/2013/02/myanmarselfdefencemethods.pdf ဒီမှာ download ဆွဲပါဗျာ။